Ikhaya iimveliso DataNumen Exchange Recovery Ukutshintshana okwangoku kwindlela yokubuyisela
Ulwazi oluneenkcukacha malunga "noTshintshiselwano okwangoku kwiNdlela yokubuyisela" Umyalezo
Indlela yoTshintshiselwano yoBuyiselo:
IMicrosoft Outlook 2003 kunye neenguqulelo ezintsha zizisa inqaku elitsha elibizwa ngokuba yi Imo yoTshintshiso egciniweyo, Ngokwenyani inguqulelo ephuculweyo yeefolda ezingaxhunyiwe kwi-intanethi kwiinguqulelo ezindala ze-Outlook. Imo yoTshintshiso egciniweyo ibonelela ngemisebenzi emininzi yokwenza ungqamaniso kunye nokusebenza ngaphandle kweintanethi ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo. Omnye wabo ngu Imo yoTshintshiselwano yoBuyiselo.
Xa iseva yokuTshintshiselana, isiseko sedatha, okanye ibhokisi yeposi enxulumana ne ifolda engaxhunyiwe kwi-intanethi (.ostifayile ukuseta kwakhona, okanye kukho ukungangqinelani phakathi kwebhokisi yeposi yokutshintsha kunye OST ifayile, ukuba usebenzisa i-Outlook 2002 okanye iinguqulelo ezindala, okanye usebenzisa i-Outlook 2003 kunye neenguqulelo ezintsha kodwa unayo Imo yoTshintshiso egciniweyo abakhubazekileyo, kwaye ukhethe ukusebenza kwi-Intanethi, emva koko i-Outlook iya kwenza ifayile entsha OST ifayile yebhokisi yeposi entsha. Endala OST ifayile ayizukucinywa, kodwa awunakufikelela kwidatha ekuyo. Emva kwexesha xa ibhokisi yeposi yoqobo ifumaneka kwakhona, uya kuba nakho ukufikelela kwidatha yakudala OST ifayile, kodwa ezo zikwi- new OST ifayile ayinakufikeleleka kwakhona. Ukuba ufuna ukufikelela kwidatha kuzo zombini OST iifayile, kufuneka uhlele iiprofayili ze-Outlook ngesandla ukuze uzithumele kwakhona ngokuhambelana OST iifayile, ezingathandekiyo.
Nangona kunjalo, ukuba usebenzisa i-Outlook 2003 kunye nohlobo lwamva, kunye nefayile ye- Imo yoTshintshiso egciniweyo Inikwe amandla, emva koko uza kubona umyalezo olandelayo wesilumkiso xa ibhokisi yokuhambisa iposi isetiwe ngokutsha okanye ingangqinelani:
Utshintshiselwano okwangoku lukwimo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo. Unganxibelelana neseva yakho yoTshintshiselwano usebenzisa inethiwekhi, sebenza ngaphandle kweintanethi, okanye urhoxise le logon.
Ebonisa i-Outlook kunye noTshintshiselwano ngoku Imo yoTshintshiselwano yoBuyiselo.
Xa ungena Imo yoTshintshiselwano yoBuyiseloUnokukhetha ezimbini:
Imowudi engasebenziyo. Ukuba ukhetha Sebenza ngaphandle, unokufikelela kwidatha yakho yakudala OST ifayile, kodwa hayi kwiseva yoTshintshiselwano. Endala OST ifayile iyafumaneka kwimowudi engaxhunyiwe kwi-intanethi.
Imowudi ekwi-Intanethi. Ukuba ukhetha Dibanisa, unokufikelela kwiseva yoTshintshiselwano, kodwa hayi kule yakudala OST ifayile. Ukuba ufuna ukufikelela kwidatha kwakudala OST ifayile, ungaphuma kwi-Outlook kunye ne-start kwakhona ngaphakathi Imowudi yangaphandle.
Ke, ngokukhetha iindlela ezahlukeneyo, unokufikelela kwi-old OST ifayile okanye ibhokisi leposi entsha kwi-Exchange server ngokukhetha.
In Imo yoTshintshiselwano yoBuyiselo, Unga guqula endala OST ifayile kwifayile yePST ukuhambisa idatha yayo kwibhokisi yeposi entsha yoTshintshiselwano.
Ukuba kamva ibhokisi yemiyalezo yokuTshintshana edibana nendala OST ifayile iyafumaneka kwakhona, emva koko ngokukhetha Dibanisa, Uya kuphuma Imo yoTshintshiselwano yoBuyiselo ngokuzenzekelayo.
Nangona kunjalo, ukuba ibhokisi yemeyile ayifumaneki ngokusisigxina, okanye ayingqinelani nendala OST ifayile ngenxa ye- OST ifayile yenkohlakalo, emva koko uphuma njani Imo yoTshintshiselwano yoBuyiselo kwaye wenze i-Outlook isebenze ngokwesiqhelo kwakhona? Apha ngezantsi kukho impendulo.
Phuma kwiNkqubo yokuTshintshiselana kunye nokuSebenza ngokuQhelekileyo kwakhona:
Ukuba ibhokisi yemiyalezo yokutshintshiselana ayifumaneki naphakade, okanye ayingqinelani nendala OST ifayile ngenxa yenkohliso yefayile, nceda wenze oku kulandelayo ukuphuma Imo yoTshintshiselwano yoBuyiselo kwaye vumela i-Outlook isebenze ngokwesiqhelo kwakhona:
Vala iMicrosoft Outlook kunye nolunye usetyenziso olunokufikelela kundala OST ifayile.
Fumana endala OST ifayile. Ungasebenzisa le ukufuna ukusebenza kwiWindows ukukhangela ifayile ye OST ifayile. Okanye khangela kwi Iindawo ezichazwe kwangaphambili kwifayile.
Gcina idatha engaxhunyiwe kwi-intanethi yakudala OST ifayile. Endala OST Ifayile iqulethe idatha engaxhunyiwe kwi-intanethi, kuquka imiyalezo yeposi kunye nazo zonke ezinye izinto, kwibhokisi yakho yeposi yokuTshintshisa, ebalulekileyo kuwe. Ukuhlangula ezi datha, kuya kufuneka ukusebenzisa DataNumen Exchange Recovery ukuskena endala OST ifayile, ukubuyisa idatha ekuyo, kwaye ugcine kwifayile ye-Outlook PST ukuze ukwazi ukufikelela kuyo yonke imiyalezo kunye nezinto ezikwi-Outlook ngokulula nangokufanelekileyo.
Gcina endala OST ifayile. Ngenxa yokhuseleko, kungcono uyigcine.
Cima iNkqubo eguqulweyo yoTshintshiselwano.I-5.1 Start Imbonakalo.
5.2 Kwiifayile ze- izixhobo menu, nqakraza Iiakhawunti ze-imeyile, nqakraza Jonga okanye utshintshe iiakhawunti ezikhoyo ze-imeyile, uze ucofe Okulandelayo.
5.3 Kwi Iinkqubo zangaphandle ze-imeyile zezi akhawunti ngolu hlobo lulandelayo uluhlu, cofa iakhawunti ye-imeyile yeServer Exchange, emva koko ucofe utshintsho.
5.4 Phantsi IMicrosoft Exchange Server, Cofa ukucoca ifayile Sebenzisa iNkqubo eguqulweyo yoTshintshiselwano khangela ibhokisi.
5.5 Phuma ku-Outlook.
Qamba ngokutsha okanye ucime endala OST ifayile.
Layita imowudi yoTshintsho egciniweyo.I-7.1 Start Imbonakalo.
7.2 Kwiifayile ze- izixhobo menu, nqakraza Iiakhawunti ze-imeyile, nqakraza Jonga okanye utshintshe iiakhawunti ezikhoyo ze-imeyile, uze ucofe Okulandelayo.
7.3 Kwi Iinkqubo zangaphandle ze-imeyile zezi akhawunti ngolu hlobo lulandelayo uluhlu, cofa iakhawunti ye-imeyile yeServer Exchange, emva koko ucofe utshintsho.
7.4 Phantsi IMicrosoft Exchange Server, Cofa ukwenza i Sebenzisa iNkqubo eguqulweyo yoTshintshiselwano khangela ibhokisi.
7.5 Phuma ku-Outlook.
Yakha entsha OST Ifayile. Restart Jonga kwaye uqiniseke ukuba useto lweakhawunti entsha yebhokisi yokutshintsha kwi-Outlook luchanekile, kwaye i-Outlook inokuqhagamshela kwiseva yakho yoTshintshiselwano ngempumelelo. Emva koko thumela / ufumane ii-imeyile zakho kwibhokisi yemeyile yoTshintshiselwano, eya kuthi ivumele i-Outlook ukuba yenze ifayile eneenkcukacha ngaphandle kweintanethi ngokuzenzekelayo kwaye ivumelanise idatha yayo nebhokisi yeposi yokutshintshiselana. Ukuba le ndlela ayisebenzi, iprofayile yakho yangoku ye-imeyile ayilunganga, kwaye kufuneka uyicime kwaye wenze entsha, ngolu hlobo lulandelayo:
8.1 Vala iMicrosoft Outlook.
8.2 Cofa Start, uze ucofe Iphaneli yokulawula.
8.3 Cofa Tshintshela kwiMbonakalo yesiqhelo ukuba usebenzisa iWindows XP okanye iinguqulelo eziphezulu.
8.4 Cofa kabini iposi.
8.5 Kwi Ukuseta Imeyile ibhokisi yencoko, nqakraza Bonisa iinkangeleko.
8.6 Khetha enye yeeprofayili ezingachanekanga kuluhlu kwaye ucofe Susa ukususa.
Phinda 8.7 de zide zonke iinkcukacha ezingachanekanga zisuswe.
8.8 Cofa Yongeza ukwenza iprofayili entsha kunye nokongeza iiakhawunti ze-imeyile ngokwezakhelo zazo kwiserver yoTshintshiselwano.
I-8.9 Start Ukubonakala kwakhona kunye nokuvumelanisa kwakhona ibhokisi yemiyalezo yokutshintshiselana, uya kuphuma Imo yoTshintshiselwano yoBuyiselo.
Ngenisa idatha efunyenwe kwinqanaba 3. Emva kokuba uphumile Imo yoTshintshiselwano yoBuyiselo, gcina entsha OST ifayile yebhokisi yokutshintsha yeposi evulekileyo, emva koko uvule ifayile yePST eveliswe kwinqanaba lesithathu nge-Outlook. Njengoko iqulethe yonke idatha efunyenweyo kwindawo yakho yakudala OST ifayile, unokukopa izinto ezifunekayo kwifayile yakho entsha OST ifayile njengoko kufuneka.